SomaliTalk.com » Maxaa keeney weerarkii lagu qaadey Masjidka Xaram 1979?
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Wednesday, February 20, 2013 // Jawaabaha waa la xiray
Assalaamu Alaykum. Maanta iyo qoraalkeena waa qiso dhab ah oo dhacday Xaramka mudo iminka laga jooga 34 sano! Qof kasta oo Muslim ah waa fahansanyahay qeymaha iyo qadarinta ay naga mudanthay magaalada barakaysan ee Makka Al-Mukarramah. Makka qof lagu dila iskadaaye, geedaheeda lama ogala in lagooya. Xitaa qofkii niyada xumaan uqaada magaaladaas Allah wuxuu ku abaalmarin doona Cadaabka Aakhira.
Dadkii gudaha Kacbada joogay waa lakala qeybsamay. Qaar waxay uqaateen inay run tahay oo safka ayey dhinac kagaleen. Qaarkale oo ubadan culimada aqoonta leh way diideen ilaa lagu maquuniyey qori caaradiis!
Juhayman iyo kooxdiisa waxay kuqanceen in lagaaray goortii uu soo bixilahaa Mahdigii lasugayey kadib markii ay arkeen waxyaabo badan oo aduunka kadhacaya. Waxa lasheegaya inay hal habeyn riyo ku arkeen inuu Muxammad Bin Abdullaahi Al-Qaxtaani yahay Mahdigii lasugaayey. Muxammad oo ahaa nin cibaado badan oo xaafid Qur’an ah ayaa sheegey inuusan dhamaystiri karin shuuradaha ‘Mahdinimada‘ maadama uusan ku abtirsan Nabiga (SAW) haseyeeshe Juhayman ayaa kuqanciyey Abdullaahi Bin Muxammad inuu sheekto inuu Quraysh kasoo jeedo asal ahaan.
Sida ay hubka ku soo galiyeen masjidka,
Qoraaga layirahdo Yaroslav Trofimov oo qoray buuga layirahdo ‘the siege of Mecca‘ oo la’oronkaro waa buugaagta yar ee arintaan laga qoray dhacdadaan- wuxu sheegaya inay jireen ciidamada Faransiis ah oo gacan kageystey how-galka laakinse aysan galin Xaramka gudahiisa.
Wadamo badan sida Jordan, Pakistan iyo Maroco ayaa muujiyey inay diyaar uyihiin inay soo diraan ciidamo haseyeeshe Sacuudiga ayaa kagaabsadey ayagoo kabaqay inay ‘hadhow’ kufaragaliyaan ‘maamulka Makka iyo Madinah‘ iyo inay kumanasheegtaan.